1. Salmoni ingangove inogadzirira-kushandisa-chinhu. Mutsva salmon fillet Kune firiji yakasungirirwa pairi pakudya kwemanheru. Kana chikafu chinonaka zviri nyore Uye inogona zvakare kushandiswa kubika akasiyana madhishi zvakare Ngatitarisei maitiro ekugadzira saumoni iri nyore, amai vemba kana wekutanga chef. Unogona kuzviita zvakanaka
2. Maitiro ekugadzirira zviri nyore usati waita
3. Chekutanga pane zvese, iyo michina inofanirwa kuve yakagadzirira. Kuti utarisire zvakajairika kune makuru salmon mafillets Iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kutenga spatula iyo iri yakati kurei kupfuura zvakajairwa. Tora icho chakakura sezvaungawana. Ungasarudza sei, fungidzira izvozvo Inofanira kunge iri spatula iyo inogona kusimudza nekushandura yakawanda yenyama pani. Uye iyo hove dzehove dzinogona kutorwa kana kuendeswa kumahwendefa akagadzirwa zvakanaka. Kana kana zvirinani Kutenga spatula yekubata hove dzehove Inonyanya kugadzirirwa chinangwa ichi, isarudzo yakanaka kwazvo.
4. Gare gare, ndakatsvaga "pani yesimbi" yakakodzera kubaya. Wobva waiisa muchoto.Mhando yacho Hapana Anonamira pani inoonekwa seyakafanira futi. Tsvaga imwe inogona kupinda muchoto chinopisa. Uye imwe sarudzo yakanaka ipani yekutsvaira ine ndiro yakasimbiswa. Ita shuwa kuti simbi yepani haina kukamurwa, yakakotama. Kana yaoneswa kune yakanyanya kupisa muchoto Uye iyo wavy mhando (mumufananidzo) yakakodzerawo kunyorera.
5. Icho chimwewo chakakosha. Diki tsono dzemhino mapapiro (Izvo zvinotaridzika sezvimedu) zvinogona kushandiswa kuburitsa pini pfupa rehove. Sarudza saizi chaiyo, yakasimba, mhando yacho inofanira kunge iri yepamusoro. Nekuti pini mapfupa esalmoni akasimba kwazvo Uye kudhonza mapfupa kunze kunofanira kuve kwakachena Kuti uwane runako rwakanaka futi
6. Chinhu chekupedzisira kugadzira mapepa echinyorwa kana aluminium pepi. Kuti ushandise kune hove dzehove dzatinoisa muchoto (hove en papillote) uye kune liner pan grill pani.
7. Pinbones kubviswa kwesalmoni.
8. Isa salmon fillets pabhodhi. Yakakura yekucheka bhodhi Kana iwe unogona kuiisa pane iyo foil pane iyo kicheni kaunda. Kurongeka kuri Isa ganda kumeso pasi. (Kunyangwe isina ganda) uye shandisa ruoko rwako kubata pfupa rakabudikira kuti uone kuti riri kupi. Uyezve inotangira panoperera panyama Nekushandisa tsono-yemhino mapapiro kuti ubate mugumo webhonzo zvakasimba uye uriburitse.
9. Kubika salmoni pane stovetop ndiyo nzira iri nyore. Kana iwe usina kana usingade kushandisa ovhoni Kana iri nzira yekubika, inosanganisira KUCHENGA NEMAOKO.
10. KUSVIRA Sautéing saumoni, kukurumidza kutsvaira nekushandura hove chete 1-2 nguva uchishandisa yakanyanya kupisa. Iyi nzira iri nyore uye inokurumidza kubika. Nzira yekuzviita inotevera
11. Sungunusa 1 kikapu yetira muhomwe yepamusoro pepakati moto. Mirira kuti bhotela riputsike uye shandura yakasviba yegoridhe yakazara, ingangoita maminetsi matatu.
12. Mwaya munyu uye mhiripiri mupani, mira maminetsi matanhatu kusvikira hove yashanduka kuita pink kuita brown. Wobva watendeuka pamusoro pehove Kuruboshwe mupani (Usadzorere hove kumashure nekudzoka) Mira kusvikira wabikwa kuti ugare, imwe maminetsi maviri kusvika kumana.
13. KUVAKA poaching isalmon yakabikwa iyo inokupa iwe yakanyatso kubikwa uye neruvara rwakanaka. Ichowo inzira yakanaka yekuita kuti hove dzibikwe zvakakwana pasina mafuta. Dzakakosha nzira dzinotevera.
14. Isa hove dzehove mupani. Wobva wawedzera mvura mupani yakakwana yekuvhara iyo hove yefillet Tevere, sasa imwe munyu, mhiripiri uye bay leaf (cardamom).
15. Simira zvishoma uye nekukurumidza, wobva wadzima moto, vhara iyo pani uye rega hove dzibike. Zvinotora maminetsi makumi maviri kusvika makumi matatu. * Mune ino kesi, salmoni yakasarudzwa inofanirwa kunge iri pakati nepakati kusvika pakukwana zvakakwana.